Mhenderekedzo dzakanakisa dzeGungwa Dema muRomania | Kufamba Nhau
Zvakaitika kwauri here kushandisa yako zhizha zhizha muRomania? Nyika ino muEurope ine mahombekombe akanaka paGungwa Dema rakazara nenzvimbo dzakanaka dzekushongedza, inodziya mamiriro ekunze, mamaira uye mamaira emahombekombe, minda yemizambiringa nemaguta ekare uye anoyevedza ekushanyira.
Mabhichi akanakisa muRomania ndeaya ari pakati Mangalia a Mamaia, ndipo panotaridzirwa mahotera, iyo gastronomy inopa uye inonyanya kushanyirwa mamiriro. Ini ndinokukoka iwe kuti uwane aya mahombekombe makuru uye uasarudze ivo kuzororo rako.
1 Romanian Gungwa Dema pamhenderekedzo
2 Mamaia, inonyanya kufarirwa
Romanian Gungwa Dema pamhenderekedzo
Gungwa Dema mhenderekedzo Yakave ichizivikanwa kwemazana emakore senzvimbo yekuenda kunorapa kana kurapa zvirwere zvemapfupa neganda, rheumatism, arthritis kana matambudziko etsinga, semuenzaniso. Saka nekufamba kwenguva mazhinji emahotera aya akarongedzwa kutenderedza iyo Wellness Tourism kana mishonga.
Izvo zvakapona kusvika nhasi saka ma spas haasi kushomeka Ivo vanopa matope ekugezera ayo anotorwa akananga kubva kune mamwe marungwa emunyu munzvimbo uye ayo akawana mukurumbira wepasirese.
Kune rimwe divi, vanhu vanopedza zororo ravo kumahombekombe vanogona uye kazhinji kutora nzendo diki kuenda mukati kuti vazive uye vawane zvimwe zvishamiso: dzimba dzemamongi ekare eBucovina, Bucharest kana delta yeDanube, semuenzaniso.
Saka, nzvimbo dzinozivikanwa dzekuzorora dzakapararira pamwe nemakiromita mazana matatu emahombekombe uye pakati pavo pane yakakurumbira Mamaia, Neptune, Saturn, Venus, Jupiter, Olympus kana Eforie Nord, Eforie Sud, Cap Aurora, Costinesti, Vama Veche, pakati pevamwe.
Mamaia, inonyanya kufarirwa
Ndiyo nzvimbo hombe uye inonyanya kufarirwa pamhenderekedzo yeRomania. Iyo yakareba makiromita manomwe uye iri pakati pe100 uye 250 metres yakafara. Kunze kwejecha pane mahotera anoyevedza akatarisana negungwa.
Mwaka wezhizha unotora kubva pakutanga kwaKurume kusvika Nyamavhuvhu uye kunze kwemwaka wezororo hapana kana munhu. Iyo iri pakati peGungwa Dema neGungwa Siutghiol uye kune aya mazuva tembiricha iri kutenderedza inofadza 30 ºC.
Kunyangwe iwo mahotera ari mana uye shanu nyeredzi iwe unogona kuwana isingadhuri pekugara kana kuenda kunodzika musasa, asi zviri pachena, kwete nzvimbo yakachipa pane dzose.
Iyo inzvimbo yekutandarira, akadzikama kupfuura Mamaia. Iri pakati peGungwa Dema neLake Techirghiol, mamamita mashoma pamusoro pegungwa. Iyi inzvimbo inozivikanwa kwazvo mugore rese uye inovavarira zvakanyanya pakushanya kwemhuri sezvo mahombekombe ayo ari emvura akadzikama.
Yekutanga 'sanatorium' yakadzokera mukupera kwezana ramakore rechiXNUMX uye vanhu vanoramba vachiuya kune zvimwe zvirwere kuti vararame Wellness Tourism. Iwe unogona kutora mukana wavo sauna kurapwa, madhaka ekugezera, kushushikana-kudzikisira kurovedza ekurapa, uye izvo mhando yechinhu.
Iwo makiromita mashanu kubva kuEforie Nord uye 19 makiromita kubva kuConstanta. Iyo inzvimbo inozivikanwa kubva 1912 asi akazonzi Carmen Sylva. Inotonyarara kuti mukoma wavo mukuru nemigwagwa yayo mitete inoyerera ichipinda mugungwa.
Iyi spa iri pakakwirira pakakwirira kupfuura mamwe maRomania maresitoreti sezvo dombo pariri pariri riri pamusoro, ingangoita makumi matatu nemashanu emamita. Kunyangwe yakanyarara, hazvireve kuti hapana hupenyu hwevashanyi.
Iyo yakanakira kuenda ndeye beach Kunaka, runako nemabhawa, amburera, matafura uye lounger kunakirwa nezuva. Chekupedzisira, runako kurapwa nemadhaka kubva kuLake Techirghiol zvinopihwa pano.
Spa iyi makiromita makumi matatu nemasere kubva kuConstanta, kumucheto kwesango saka inzvimbo yakasvibira kupfuura iyo yese.
Iine mahotera makumi maviri uye pane akasiyana akasiyana yemakamuri, mabhawa, maresitorendi uye masitepisi anogara vashanyi kunyanya. Vashanyi ava vese vadiki nevakuru vane mhuri kubvira kune mitambo yemvura, open air cinema, theatre shows uye paki yekuvaraidza.
Iyo spa iri padyo neNeptune saka zvinoita ivo vanoumba imwe. Kana tikazvitora zvakasiyana idiki asi zvakare inozivikanwa kwazvo muzhizha.
Yaive yakatonyanya kufarirwa munguva dzecommunism uye zvaidhurawo zvakanyanya. Ivo chete vanhu vakakokwa neaive mutungamiri wenyika, Ceausescu, ndivo vakatsika pairi.
Iyo mahombekombe ingori kiromita chete kureba uye rinozorora pane bay rakaputswa kuita bays nemadhamu. Kana iwe uchitsvaga iyo diki uye yakanyarara nzvimbo ichi ndicho chakanakisa sezvo chiri nzvimbo diki dzekuzorora muRomania yese.
Kune maresitorendi akakwana, makirabhu nemabhawa ekunakidzwa pasina kuita ruzha.
Haisi nzvimbo inopisa kwazvo muzhizha uye iri pakati chaipo peJupiter neSaturn. Nekuda kwenzvimbo yaro kusvika parizvino kumabvazuva pane angangoita maawa gumi nemaviri ekupenya kwezuva pazuva saka zvakanaka.
Runyararo rwayo, kupa kwayo kwakanaka kwevaraidzo uye gastronomy uye kupihwa kwemitambo yemvura uye spa iyo yaita kuti ive spa iyo inokwezva vanhu vakuru.
Mhepo yegungwa inozorodza mumwaka wezhizha uye inosvika gungwa rayo rakareba makiromita maviri rakakomberedzwa nemahotera nemahostel. Iinewo dzimba mbiri dzevashanyi, iyo Delta neDanube, ine dzimba dzepamusoro uye yavo varaidzo inopa, uye isu tinowanawo spas mukati memamwe mahotera.
Saturno iguta rakanaka kwazvo remahombekombe, rine maruva mazhinji mumigwagwa yaro uye ne mitengo inosvikika kupfuura vavakidzani.
Iwo makiromita makumi mana nemashanu kubva kuConstanta uye mahombekombe ayo akashongedzwa nemawere marefu. Haisi guta, iguta inozivikanwa nenzvimbo dzayo dzehutano vanova nyanzvi kana zvasvika pakurapa zvirwere uye kusagadzikana kweganda nemuviri.
Iyo ine inokwezva enhoroondo sekumira munzvimbo imwechete uko kwakavakirwa Callatis Fortress kubva muzana ramakore rechitanhatu (nhasi ine nzvimbo yekudyira pasi pevhu iyo inokurudzirwa kwazvo), mazhinji tsika nemagariro, ezvinyorwa, zvekuita, uye muzhizha maawa mazhinji ezuva.
Haisi nzvimbo inopisa kwazvo, verenga izvozvo muzhizha haripfuuri 25ºCSaka kana iwe usingade mafungu ekupisa, ino inzvimbo huru yekuenda. Muchokwadi, ese mahombekombe eGungwa Dema muRomania akadaro, ane zuva rakawanda asi risingapisi zvachose.
Kana iwe uri hippie kana uchida chimwe chinhu chakasununguka saka iyi ndiyo yakanakisa nzvimbo yekutandarira yese nekuti kunanga vechidiki. Iwo makiromita makumi matatu kubva kuConstanta uye gungwa rayo rakareba mamita 800, kunyangwe iri yakatetepa nekuti upamhi hwayo huri pakati pe10 kusvika 15 metres.
Kune kazhinji vadzidzi vazhinji, mitengo yakaderera, kune akawanda mahotera madiki, dzimba dzevashanyi dzimba uye makambi. Iyo kunyange ine dziva diki, rakanyanya, rine munyu uye rine matope iro rinoshandiswa kurapa rheumatism.
Sezvauri kuona kune dzakawanda nzvimbo dzekuzhizha paGungwa Dema mhenderekedzo muRomania, imwe yekuravira kwese uye kune vese vashanyi: hwomutambarakede, wakanyarara, mahipi, wemhuri dzine vana uye yeavo vanopfuura makore makumi matanhatu ekuberekwa.
Uyu ndiwo muenzaniso wemamwe mahombekombe ayo anozivikanwa asi havazi ivo voga. Mamwe mahombekombe ndiCorbu, Vadu, mamwe mahombekombe asina kuvharwa, Mai vakanyarara, Vama Veche, Cap Aurora uye rondedzero inoenderera. Unofanira kusarudza kwauri kuenda, asi sezvaunoona Romania ine yakapihwa yakakura kwazvo zhizha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Beaches » Mhenderekedzo dzakanakisa dzeGungwa Dema muRomania
North Sentinel, chitsuwa chevanodya vanhu